သမ်မတရုံးကတိုကျရိုကျကိုငျတှယျတဲ့မူးယဈဌာနကနေ မူးယဈဆေးရောငျးခသြုံးစှဲသူ ၁၆၆ ဦးထပျမံဖမျးဆီး
သမ်မတရုံးက တိုကျရိုကျကိုငျတှယျတဲ့မူးယဈဌာနကနေ မူးယဈဆေးဝါးရောငျးခသြုံးစှဲသူ ၁၆၆ ဦးကို တတိယအကွိမျအဖွဈ နဲ့ ဖမျးဆီးအရေးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈဇှနျလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ စတငျခဲ့တဲ့ မူးယဈဆေးဝါးအထူးသတငျးတိုငျကွားရေးဌာနကို တိုငျကွားလာတဲ့ စာရငျးတှအေရ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနကနတေဈဆငျ့ သွဂုတျလ ၄ ရကျနအေ့ထိ အရေးယူခဲ့တဲ့ စာရငျးတှအေရ အမှုပေါငျး ၁၀၉ မှုပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
တရားခံတှအေနနေဲ့ ကြား (၁၄၂ )ဦး၊ မ (၂၄) ဦး အပါအဝငျ စုစုပေါငျး ၁၆၆ ဦးကို အရေးယူဖမျးဆီးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ ဘိနျးဖွူ ၁၇၃၉. ၃၅ ဂရမျ၊ ဘိနျးမဲ (၃၀) ဂရမျ၊ ဘိနျးခြေးခဲ (၂၇.၅၀) ဂရမျ၊ဘိနျးရညျ(ဝ.၁၀) လီတာ၊ ဘိနျးဆီခဲ (၅.၉၀) ဂရမျ အပါအဝငျ မူးယဈဆေးဝါးတှကေို ဖမျးဆီးရမိခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ ထပျပွီးဖမျးဆီးဖို့ လုပျဆောငျမှာဖွဈသလို ထုတျပွနျပေးသှားမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
မူးယဈဆေးဝါးဖမျးဆီးတာတှကေို သမ်မတရုံးကနေ တိုကျရိုကျညှနျကွားခကျြနဲ့ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာနနဲပ သကျဆိုငျရာ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့တှကေို တိုငျကွားနိုငျတဲ့အပွငျ ကွီးမားတဲ့ မူးယဈဆေးရောငျးဝယျမှုတှကေို အထူးသတငျးတိုငျကွားရေးဌာနဖုနျး 067-590200 , 067- 590233 ကို ဆကျသှယျတိုငျကွားနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သမ္မတရုံးက တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်တဲ့မူးယစ်ဌာနကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချသုံးစွဲသူ ၁၆၆ ဦးကို တတိယအကြိမ်အဖြစ် နဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနကို တိုင်ကြားလာတဲ့ စာရင်းတွေအရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတစ်ဆင့် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့အထိ အရေးယူခဲ့တဲ့ စာရင်းတွေအရ အမှုပေါင်း ၁၀၉ မှုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တရားခံတွေအနေနဲ့ ကျား (၁၄၂ )ဦး၊ မ (၂၄) ဦး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၆၆ ဦးကို အရေးယူဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဘိန်းဖြူ ၁၇၃၉. ၃၅ ဂရမ်၊ ဘိန်းမဲ (၃၀) ဂရမ်၊ ဘိန်းချေးခဲ (၂၇.၅၀) ဂရမ်၊ဘိန်းရည်(၀.၁၀) လီတာ၊ ဘိန်းဆီခဲ (၅.၉၀) ဂရမ် အပါအ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ထပ်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်သလို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးတာတွေကို သမ္မတရုံးကနေ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲပ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကို တိုင်ကြားနိုင်တဲ့အပြင် ကြီးမားတဲ့ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုတွေကို အထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနဖုန်း 067-590200 , 067- 590233 ကို ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။